Ama-Proteas adlule ekubuyiselweni emuva kabili ukuphushela ukunqoba
Ama-Standard Bank Proteas adlule ebunzimeni okumbalwa ngokulahlekelwa u-Morne Morkel, ene-side strain kanye nesikhathi esiningi esithathwe isimo sezulu esibi ukuze baqhubeke baphushele ukunqoba bedlala ne-Bangladesh osukwini lwesine lomdlalo wokuqala we-Sunfoil Test e-Senwes Park ngeSonto.
Ngokwazi ngesimo sezulu esingacacile, u-Faf du Plessis no-Temba Bavuma bahole kahle ekunyuseni i-run rate kwi-innings yesibili ye-South Africa emuva kokuthi kuphume u-Hashim Amla.
Bobabili banezelele ngama-runs angu-149 phakathi kwe-session yasekuseni kungaphume muntu nge-run rate edlulile ku-5 nge-over. Ekugcineni bahlanganise ama-runs angu-142 kuma-overs angu-29, u-Du Plessis ehlanganisa u-81 (101 balls, 6 fours, 1 six) no-Bavuma wenze u-71 (107 balls, 7 fours).
Ngisho u-Keshav Maharaj uhlaselile ngaphambi kokuthi u-Du Plessis enze i-declaration, babekela i-Bangladesh umphumela ongu-424.
u-Morkel usheshise ama-Proteas ekunqobeni ngokuthola ama-wicket amabili kwi-over yakhe yokuqala futhi ebengathola eyesithathu ukube akayidlulanga i-crease ngesikhathi ekhipha ukapteni, u-Mushfiqur Raheem. Ukapteni uqhubekile kwaze kwaba ikhefi letiye eligcine laba ukuphela kosuku kodwa ulahlekelwe ashaya naye kwi-over yokugcina ngesikhathi u-Maharaj ekhipha u-Imrul Kayes onqakwe u-Quinton de Kock.
Lokhu kushiye i-Bangladesh nentaba ku-49/3 futhi, nokho ngathi u-Morkel angeke esawuqeda umdlalo, basanamanye amaqhinga abangawaveza. Lokhu kukhuluma kakhulu ngo-Maharaj olethe izinkinga njengoba i-pitch isiqala ukuveza ukuguga.
-Bangladesh yenza ama-Proteas akusebenzele ukuba ngaphambili kwi-innings yokuqala u-Amla no-Elgar baqinisa isibambo sama-Proteas kwi-Test yokuqala Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada uMarkram uzodlala umdlalo wakhe wokuqala kwi-Test series ne-Bangladesh